Yohane 12 NA-TWI - Wɔsra Yesu ngo wɔ Betania - Aka - Bible Gateway
Yohane 11Yohane 13
Yohane 12 Nkwa Asem (NA-TWI)
12 Aka nnansia na Twam Afahyɛ no adu no, Yesu kɔɔ Betania, kurow a na Lasaro a Yesu nyanee no fi awufo mu no te mu no mu. 2 Wɔtow Yesu pon. Marta na ɔsomee wɔ saa opontow yi ase. Lasaro tenaa Yesu nkyɛn pɛɛ wɔ ɔpon no ho. 3 Wɔredidi no, Maria faa ngohuam bi a ne bo yɛ den behwie guu Yesu nan ase de ne tinhwi popae. Ngo no hua gyee ofie hɔ nyinaa.